Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0613 zom
Lesona 06 : Dodona hamela heloka (Jonà)
04 - 10 Mai 2013
Zoma 10 May
Vakio ireto teny nalaina avy tamin’ny boky manaraka ireto dia mifanakaloza hevitra mikasika ny fomba anampian’ireo antsika hahatakatra mazava tsara kokoa ny hafatra ampitaina ao amin’ny bokin’i Jônà.
“Na rahoviana na rahoviana no mila fanampiana ny zanak’Andriamanitra dia manana tombontsoa sarobidy izy ireo miantso Azy mba hamonjy. Tsy maninona na tsy mendrika aza ny toerana misy azy, ny sofin’Andriamanitra mamindra fo dia misokatra mandrakariva hihaino ny fitarainany. Na dia foana sy maizina aza ny toerana misy azy, dia azo ovàna ho tena tempoly izany amin’ny alalan’ny vavaka ataon’ny zanak’Andriamanitra.” — The SDA Bible Commentary, EGW, b. 4, t. 1003.
“Nanatontosa ny iraka nampanaovina azy ihany i Jona, dia ny hampiomana an’io tanàna lehibe io, fa menatra sy mangaihay sady tsy afa-nahalala akory izay fikasan’Andriamanitra Izay namindra fo tamin’i Ninive. Fa na dia tsy tanteraka aza ny toe-javatra nambara mialoha, dia tsy diso tamin’izay nokendreny akory ny hafatra nentin’ilay mpaminany avy amin’Andriamanitra, ka fantatra teo amin’ireo mpanompo sampy ny herin’ny fahasoavan’Andriamanitra.” — MM, EGW, t. 229.
Ampianarin’ny bokin’i Jônà fa eo ambany fifehezan’ Andriamanitra tanteraka ny zavaboary. Eritrereto anefa hoe namoy ny havany akaiky ny iray amin’ny namanao noho ny loza avy amin’ny zavaboary. Ahoana no hanazavanao aminy fa mbola mifehy izao tontolo izao foana Andriamanitra na dia misy aza ireo loza avy amin’ny zavaboary manimba ny ampahany amin’ity tanintsika ity ary mahafaty olombelona maro?
Vakio ny andininy farany ao amin’ny bokin’i Jônà. Inona no ampianarin’izany antsika mikasika ny andraikitsika hitondra ny iraka nampanaovina antsika ho any amin’ny vazan-tany efatra eo amin’izao tontolo izao?
Mampitaha an’Andriamanitra amin’ny mpanjaka tezitra i Jesôsy ao amin’ny fanoharana momba ilay mpanompo tsy namela heloka (Mat. 18:21–35), mpanjaka tezitra izay nanatsoaka ny famelan-keloka nomeny teo aloha ary nampiditra an-tranomaizina ilay mpanompo tsy mba namela heloka. Tena tsoahin’Andriamanitra tokoa ve ny famelan-keloka nomeny? Misy Kristianina sasany manizingizina fa tsy manao izany Andriamanitra. Amin’ny maha-fiangonana antsika, inona no hevitsika mikasika izany lohahevitra izany? Fa nahoana?
Ho an’ny ankamaroan’ny olona izay manana ny fomba fisainan’izao tontolo izao latsa-paka ao anatiny, dia tsy tokony horaisina ho resaka matotra ity resaka momba ny lehilahy iray voatelina velona sy niaina tao anaty “trondro lehibe” ity. Araka ny efa hitantsika tany aloha tany anefa dia i Jesôsy mihitsy no nilaza mazava tsara fa tantara marina io tantara io. Ahoana no anampian’io tantaran’i Jônà io antsika hahatsapa fa tena tery sy voafetra tokoa ny fijerin’ireo mpanohitra ny fisian’ny fahagagana ny tena zava-misy marina?